ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव: तीन वर्षकै उच्च दरमा नागरिक बचतपत्र जारी हुँदै Bizshala -
ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव: तीन वर्षकै उच्च दरमा नागरिक बचतपत्र जारी हुँदै
काठमाण्डौ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप तानातानका लागि ब्याजदर वृद्धिको होडबाजी गरिरहँदा त्यसको प्रभाव नेपाल राष्ट्रबैंकले निश्कासन गर्न लागेको नागरिक बचतपत्रमा समेत देखिएको छ ।
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले साधारण बचतमै १० प्रतिशतसम्म र मुद्धतीमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेपछि आफूले निश्कासन गर्ने बचतपत्र बिक्री हुन नसक्ने निश्कर्ष निकाल्दै नेपाल राष्टबैंकले आगामी चैत १ देखि बिक्री खुल्ला गर्न लागेको ५ वर्षे ''नागरिक बचतपत्र २०७९“ख”का लागि वार्षिक ९ प्रतिशत ब्याजदर अफर गरेको हो ।
नेपाली नागरिकले मात्रै खरीद गर्न पाउने नागरिक बचतपत्रमा अफर गरिएको यो ब्याजदर तीनवर्षकै उच्च हो ।
केन्द्रीय बैंकले २०६९ सालमा ९.५ प्रतिशत ब्याजदरसहितको बचतपत्र निश्कासन गरेको थियो । त्यसपछि ५ पटक निश्कासित बचतपत्रमध्ये कुनैमा पनि ब्याजदर ९ प्रतिशत अफर गरिएको थिएन, अधिकतम ब्याजदर ८.५ प्रतिशत दिइएको थियो ।
लगानीयोग्य रकमको अभाव भएर ब्याजदर वृद्धिको होडबाजी चलेपछि राष्टबैंकले समेत तीन वर्षपछि बचतपत्रको ब्याजदर ९ प्रतिशत अफर गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
बजारको उतारचढावबाट जोखिम लिन नचाहनेले ५ वर्षका लागि वार्षिक ९ प्रतिशत ब्याज लिएर बचतपत्रमा ढुक्कले लगानी गर्न सक्नेछन् । यसमा लगानी गरेपछि बजारमा जतिसुकै उतारचढाव आए पनि अफर गरिएको ब्याजदर घट्ने छैन ।
राष्ट्रबैंकले यो पटक २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचतपत्र निश्कासन गर्न लागेको हो । यो बचतपत्रमा घटीमा दश हजार रुपैयाँ र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई रु. दश हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकमा लगानी गर्न सकिनेछ । ब्याजकर कटाएर ६ ६ महिनामा ब्याज भुक्तानी हुनेछ ।
बचतपत्रको बिक्री चैत १ देखि २१ गतेसम्म खुल्ला रहने केन्द्रीय बैंकको सूचनामा उल्लेख छ । बचतपत्रको निश्कासन चैत २६ गते हुनेछ भने साँवा २०७९ चैत २६ गते भुक्तानी गरिने बताइएको छ ।
यो बचतपत्र धितो राखी यस बैंक बाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन/दिन सकिनेछ।
कहाँ पाइन्छ आवेदन फारम ?
आवेदन फारम बजार निर्माताको इजाजतपत्र लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र नेपाल राष्ट्र बैंकका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरुबाट निःशुल्क पाइने । यस बैंकको वेब साइट www.nrb.org.np मा Public Debt बाट डाउनलोड पनि गर्न सकिने ।
कहाँ बुुझाउने आवेदन फारम ?
यो नागरिक बचतपत्रको आवेदन फारम बजार निर्माताको इजाजतपत्र लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र काठमाडौं उपत्यका बाहिरका नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यालयहरुमा बुझाउन सकिने । (बजार निर्माताहरुको सूची यस बैंकको वेबसाईट www.nrb.org.np मा Public Debt अन्तर्गत उपलब्ध रहेको)
अन्य जानकारी यस्तो छ:
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले पाल्पा जिल्ला...
ब्याजदर १३% भन्दा माथि नबढाउने सहमतिमा नवील बैंकको भाँजो,
काठमाण्डौ । तत्काल १३ प्रतिशत भन्दा माथि नजाने बैंकरहरुबीचको मौखिक...
सिभिल बैंकबाट अजोड इन्स्योरेन्सको सेवा पाइने
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमिटेडले जीवन बीमा सेवालाई विस्तार गर्ने...
अनलाइन सपिङमा जनता बैंकको सुविधा, कार्डमार्फत भुक्तानी गर्न
काठमाण्डौ । ईन्टरनेटको प्रयोगमा भएको वृद्धिसँगै सोको माध्यमबाट...